१० आश्चर्यजनक मार्केटिंगको लागि अविश्वसनीय सामग्री लेखन उपकरण Martech Zone
१० आश्चर्यजनक मार्केटिंगको लागि अविश्वसनीय सामग्री लेखन उपकरणहरू
बुधबार, मार्च 13, 2019 आइतवार, मार्च १,, २०१। जो म्याक्लिन
सामग्री लेखनको शक्ति र सर्वव्यापी वर्णन गर्न सही शब्दहरू भेट्टाउन गाह्रो छ। सबैलाई आजका दिन गुणवत्ता सामग्री चाहिन्छ - एमेच्योर ब्लगरहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय निगमहरूमा तिनीहरूका उत्पादनहरू र सेवाहरूको प्रबर्धनको लागि प्रयास गर्दै।
रिपोर्ट अनुसार ब्लग प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूले %%% थप लिंकहरू तिनीहरूको गैर ब्लगिंग समकक्षहरूको भन्दा तिनीहरूको वेबसाइटहरूमा। अर्को अध्ययनले देखाउँदछ कि तपाईको वेबसाइटको एक मुख्य अंशको रूपमा ब्लगको विशेषताले तपाईंलाई 434 XNUMX% राम्रो हुने मौका दिन्छ उच्च स्थानमा खोज ईन्जिनहरूमा।
तर सफल लेखक बन्नको लागि, तपाईंले आर्ट अनुप्रयोगहरू र प्लगइनहरूको राज्य प्रयोग गर्न आवश्यक छ। डिजिटल सहायकहरूले तपाइँलाई तपाइँको लेखन सुधार गर्न मद्दत गर्दछ, त्यसैले अचम्मको बजारका लागि १० अविश्वसनीय सामग्री लेखन उपकरणहरू जाँच गर्न पढिरहनुहोस्।
१. ब्लॉग शीर्षक जेनेरेटर
यदि तपाईंले हरेक हप्ता वा दैनिक दैनिक पोष्टहरू प्रकाशित गर्नुपर्‍यो भने नयाँ सामग्री विचार खोज्न सजिलो हुँदैन। त्यो किन हो Hubspot उनीहरूको साइटहरूको लागि उत्तम शीर्षक फेला पार्न लेखकहरूलाई मद्दत गर्न एक ब्लग विषय जेनरेटर विकास गर्नुहोस्। प्रक्रिया धेरै सरल छ: एक कुञ्जी शब्द प्रविष्ट गर्नुहोस् र उपकरणले तपाईंलाई धेरै विचारहरू देखाउँदछ।
उदाहरण को लागी, हामी प्रवेश गर्नुभयो मार्केटिङ र निम्न सुझावहरू प्राप्त:
मार्केटिंग: अपेक्षा बनाम वास्तविकता
के मार्केटिंगले संसारलाई शासन गर्दछ?
मार्केटिंगमा अर्को ठूलो कुरा
मार्केटिंग १ 140० भन्दा कम वर्णहरूमा वर्णन गरिएको छ
हबस्पट ब्लग विषय जेनरेटर FATJOE ब्लग विषय जेनरेटर
2। कुञ्जीपाटी उपकरण
यदि तपाईं हेर्न चाहानुहुन्छ भने गुगलका कीवर्ड प्लानर बाहिरका चीजहरूले कसरी काम गर्दछन्, हामी तपाईंलाई सिफारिस गर्दछौं कि यो कीवर्ड टूलको परिक्षण गर्नुहोस्। प्लेटफर्मले प्रत्येक खोज टर्मका लागि 700०० भन्दा बढी लाँगटेल किवर्ड सुझावहरू उत्पन्न गर्न सक्षम गर्दछ।
यो उपकरणले तपाईंलाई एक विशेष खाता सिर्जना गर्न सोध्दैन, त्यसैले तपाईं यसलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जति पटक तपाईंलाई आवश्यक हुन्छ। के तपाइँ कुञ्जी शब्द उपकरणबाट के आशा गर्न सक्नुहुन्छ छिटो सब भन्दा साधारण गुगल खोजी पहिचान गर्न र खोजशब्दहरू खोज्नु जुन तपाइँको लक्षित श्रोताको आवश्यकताको साथ पूर्ण रूपले गुन्जाउँदछ।
यहाँ आउँछ हाम्रो व्यक्तिगत मनपर्ने कोफिटिभेटिस्। यो मञ्च तपाईं सबै बाहिर नि: शुल्क आत्माहरु को लागी डिजाईन गरीएको छ जसले अफिसको बाहिर काम गरेर आनन्द लिन्छ तर यो किन्न सक्दैन। कफिटिभिटीले तपाईंको सिर्जनात्मकता बढाउन र तपाईंलाई अझ राम्रोसँग काम गर्न मद्दत गर्नको लागि क्याफेको परिवेश ध्वनिको पुनःनिर्माण गर्दछ।
यसले बिभिन्न गनगन र क्याफे डे पेरिस देखि दिउँसो खाजा लाउन्ज र ब्राजिल बिस्ट्रो सम्म परिवेशी ध्वनिको विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछ। कोफिटिभिटीले तपाईलाई आरामदायक र चिल आउट वातावरणमा काम गर्ने भावना प्रदान गर्दछ जुन धेरै लेखकहरूको लागि वास्तविक प्रेरणा बूस्टर हो।
Stay. ध्यान केन्द्रित रहनुहोस्
ढिलाइ उत्पादकताको हत्यारा हो, तर यस समस्यासँग पनि व्यवहार गर्ने तरिकाहरू पनि छन्। रहो ध्यान केन्द्रित समय को मात्रा सीमित गरेर तपाईंको उत्पादकता वृद्धि गर्दछ तपाईं समय बर्बाद वेबसाइटहरूमा खर्च गर्न सक्नुहुनेछ। यस्ले कसरी काम गर्छ?
प्लगइनले अनलाइन खर्च गर्ने समय मापन गर्दछ र सबै सुविधाहरू रोक्दछ जति नै समय छुट्याइएको समय प्रयोग भएको छ। यसले ढिलाइ गर्नेहरूलाई उनीहरूको काममा ध्यान दिन बाध्य गर्दछ र तिनीहरूलाई दैनिक कार्यहरू र उद्देश्यहरू पूरा गर्न मद्दत गर्दछ। हामी सार्वजनिक रूपमा हाम्रा सँगी सहयोगीहरूलाई धन्यवाद दिन्छौं निबन्ध लेखन भूमि हामीलाई यो अद्भुत उपकरणको परिचय दिँदै!
ध्यान केन्द्रित रहनुहोस्
5। 750 शब्दहरू
लगभग thousand०० हजार लेखकहरूले विश्वव्यापी 500० शब्दहरू बहुमूल्य लेखन सहायकको रूपमा प्रयोग गर्छन्। यो उपकरण एक्लो उद्देश्यको साथ बनाईएको हो - ब्लगर्सलाई दैनिक आधारमा लेख्ने बानी ब्यवहार गर्न मद्दत गर्न। जसरी यसको नामले सुझाव दिन्छ, साइटले सामग्री रचनाकारहरूलाई कम्तिमा 750० शब्दहरू (वा तीन पृष्ठ) प्रत्येक दिन लेख्न प्रोत्साहित गर्दछ। जब सम्म तपाईं यो नियमित रूपमा गरिरहनु भएको छ त्यसमा केही फरक पर्दैन। लक्ष्य स्पष्ट छ: दैनिक लेखन केही समय पछि स्वत: आउँनेछ।
6. मेरो निबन्ध रश
ब्लग पोष्ट लेख्न गाह्रो छ, तर उच्च-स्तरीय शैक्षिक लेखहरू लेख्नु अझ चुनौतीपूर्ण छ। यसैले केही लेखकहरूले रुश्मीसे प्रयोग गरे, एजेन्सी जो दर्जनौं अनुभवी लेखकहरूलाई विशेषज्ञताका क्षेत्रहरूमा काम गर्दछन्।
क्रेग Fowler, मा एक Headhunter युके क्यारियर बूस्टर, भन्छन् कि Rushmyessay ज्यादातर मास्टर वा पीएचडी डिग्री को लागी व्यक्तिहरु लाई काममा लगाउँछ जसले छिटो डेलिभरी र शीर्ष खालको गुणवत्ता ग्यारेन्टी गर्दछ। अझ बढी प्रभावशाली कुरा के हो भने रुष्म्यासेले ग्राहकहरुलाई २ 24/7 ग्राहक समर्थन प्रदान गर्दछ, ताकि तपाईले सन्देश पठाउन वा तिनीहरुलाई कल दिन सक्नुहुन्छ जब तपाई चाहानुहुन्छ।
मेरो निबन्ध रश
Survey. सर्वेक्षण बाँदर
सबै भन्दा राम्रो पोष्टहरू रमाईलो र आकर्षक छन्, त्यसैले तिनीहरू प्रश्नहरू सोधेर वा टिप्पणी छोडेर कार्य गर्नको लागि प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रेरित गर्छन्। यदि तपाईं लेख अधिक अन्तरक्रियात्मक बनाउन चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले सर्वेक्षण बाँदर प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यो एक सरल सर्वेक्षण डिजाइनर हो जसले तपाईंलाई केही मिनेटमा अनलाइन राय पोल्क्स शिल्प र प्रकाशन गर्न अनुमति दिन्छ। यस तरिकाले, तपाईं आफ्ना अनुयायीहरूलाई महत्त्वपूर्ण के हो निर्णय गर्न दिन र यसलाई भविष्यका ब्लग पोष्टहरूको लागि प्रेरणाको स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
सम्पादन बिना लेख प्रकाशन कहिले पनि राम्रो विचार हो। तपाईंले त्यहाँ पाठको प्रत्येक सानो टुक्रा जाँच गर्नुपर्नेछ कि त्यहाँ कुनै हिज्जे वा व्याकरण त्रुटिहरू छैनन्। जे होस्, यदि यो म्यानुअल्ली गर्न चाहनुहुन्छ भने यो कठिन काम हुन सक्छ, त्यसैले हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईले प्रयोग गर्नुहोस् Grammarly। एक लोकप्रिय प्रूफरीडिंग प्लगइनले सेकेन्ड भित्र सबै पोष्टहरू जाँच गर्न सक्छ र त्रुटिहरू, जटिल पाठ, र अन्य धेरै विवरणहरू हाइलाइट गर्दछ जसले तपाईंको सामग्रीलाई त्रुटिपूर्ण बनाउँछ।
G। ग्रेग्ड खानीहरु
यदि तपाइँ तपाइँको पोष्टहरू प्रफ्रेड गर्न मेसिन चाहनुहुन्न भने, त्यहाँ अर्को सजिलो समाधान छ। यो दर्जनौं कुशल सम्पादकहरूको साथ ग्रेग्रेडमिनेर्स, लेखन र सम्पादन एजेन्सीको रूपमा आउँछ। तपाईंले तिनीहरूलाई कल मात्र दिनुपर्दछ र तिनीहरूले तपाईंलाई चाँडै खाता व्यवस्थापक माना assign्कन गर्नेछन् जसले केस लिन्छन्। यो सेवा प्रयोग गरेर, तपाईं पूर्णता सम्पादन र शैली-बुद्धिमान भन्दा कम केहि आशा गर्न सक्नुहुन्न।
हाम्रो सूचीमा अन्तिम उपकरण पक्कै पनि एक चाखलाग्दो हो। क्लिचि फाइन्डरले लेखकहरूलाई अत्यधिक प्रयोग भएका शब्दहरू वा वाक्यांशहरूलाई पहिचान गरेर र हाइलाइट गरेर उनीहरूको सामग्री पोलिश गर्न मद्दत गर्दछ। अधिकांश व्यक्तिहरू यस समस्यामा ध्यान दिँदैनन्, तर तपाईं अनौंठो लेखनमा कति क्लिचहरू छन् भन्ने देखेर तपाईं छक्क पर्नुहुनेछ। गम्भीर लेखकको रूपमा तपाईले यो तपाईलाई पनि हुन नदिनुहोस्, त्यसैले क्लिचि फाइन्डर प्रयोग गर्नुहोस् खतरा हटाउन।
उत्तम ब्लगरहरू केवल स्मार्ट र रचनात्मक मात्र होइन तर अनलाइन लेखन अनुप्रयोगहरू र प्लगइनहरू प्रयोग गर्नमा सफल छन्। यसले लेखकहरूलाई छिटो लेख्न र हप्ता पछि राम्रो लेखहरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ, जुन एक शीर्ष-स्तर सामग्री डिजाइनर बन्नको लागि आधारभूत पूर्व शर्त हो।
हामीले तपाईंलाई १० अविश्वसनीय सामग्री लेख्ने उपकरणहरूको सूची देखाएका छन जसले तपाईंलाई तपाईंको मार्केटिंग गतिविधिहरू सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। निश्चित गर्नुहोस् कि उनीहरूलाई जाँच गर्नुहोस् र टिप्पणी लेख्नुहोस् यदि तपाईंसँग हामीसँग साझेदारी गर्न अन्य चाखलाग्दो सुझावहरू छन्!
प्रकटीकरण: Martech Zone यस लेखमा व्याकरणको लागि यसको सम्बद्ध लिंक प्रयोग गर्दैछ।
टैग: ब्लग शीर्षक जनरेटरकफिटिभिटीमेरो निबन्धमा हतार गर्नुहोस्लेखन उपकरण
Eff प्रभावी मोबाइल रूपान्तरण अनुकूलन सुझावहरू जुन तपाईले ग्राहकहरूलाई जित्न सक्नुहुन्छ